Musharax Cali Dhahar “Baarlamaan Xukuumad ka madax banaan, lana xisaabtama ayaan hogaamin doona”
GAROOWE(P-TIMES)- Xildhibaan Cali Axmed Dhahar oo mudo dheer soo maamulayay howlaha baarlamaanka iyo agaasinkiisa guud, haddana katirsan golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada Garoowe uu in uu yahay musharax u taagan qabashada Afhayeenka baarlamaanka, ka dib markii xilka laga qaaday Gudoomiye Dhooba-Daareed.
Cali Dhahar ayaa sheegay in uu wax badan ka qaban doono howlaha baarlamaanka, isagoo sheegay in uu ku hagi doono wadada sharcigu yahay ee ay u soo dirsadeen bulshada Puntland, isagoo sheegay in laga sugayo baarlamaanka shaqooyin balaaran.
Musharaxa ayaa sidaas oo kale cadeeyey in uu raaci doono xeer hoosaadka golaha iyo Sharuucda dalka oo ogol in lala xisaabtamo Xukuumadda, wuxuuna tilmaamay in sharafta goluhu ay sidaas ku jirto.
Mudanayaasha baarlamaanka ayu ka codsaday in ay siiyaan codkooda, isagoo sheegay in uu ugu hiilin doono in ay noqdaan kuwa sharaf kudhex leh bulshada Puntland, wuxuuna bogaadiyey talo soo jeedintooda ku aadan musharaxnimadiisa.
Cali wuxuu balan qaaday in sida sharcigu qabo ay u kala madax banaan doonan baarlamaanka & Xukuumadda, haddii loo doorto xilkan Khamiista nagu soo wajahan.
Mudanayaal katirsan golaha ayaa ku cadaadiyey in uu Cali Axmed Dhahar noqdo musharax u taagan xilkan, sidda ay sheegayaan warar laga helayo magaalada Garoowe, waxaana muuqata loolan adag oo ilaa habeen dambe socon doona.
Khamiista todobaadkan oo ku beegan, markii ay Xukuumada Puntland weerartay Aqalka baarlamaanka ayaa la qaban doona doorashada Afhayeenka baarlamaanka oo ay gudoomiyihii hore iyadu riday, markii lacag loo adeegsaday soo bixitaankiisii.